क्राइप्टोकरन्सी रोजगार पूर्ण सूची: EOS, लहर, Litecoin र अधिक!
ब्लॉकचैन करियर अवसरहरूको लागि क्राइप्टोकरन्सी रोजगार गाइड
फेब्रुअरी 18, 2018
भिसाका साथ दुबई रोजगारहरू - हायरिiring कम्पनीहरू खोज्नुहोस्
Cryptocurrency Jobs खोज्नुहोस्
Cryptocurrency रोजगार बजार विश्वभर सुपर छिटो बढ्दैछ। दुबई शहर संसारको पहिलो blockchain संचालित सरकार बन्छ। के हाम्रो शहर एक्सपो 2020 भन्दा पहिले पहिलो blockchain संचालित सरकार बन्न चाहान्छ? क्राइप्टोकरन्सी रोजगार खाली पदहरू पागल जस्तो बढ्दैछन्। त्यहाँ गैर-आईटी कामदारहरूको लागि धेरै नयाँ रोजगारीका अवसरहरू छन्। व्यक्ति बिटकोइन वा Ethereum वा रिपल भुक्तान प्रणाली जस्तै स्टार्टअप कम्पनीहरूको लागि खोजी गर्दै। उदाहरण को लागी, Bitcoin.com वेबसाइट को नयाँ दुनिया भर मा बनाइएको थियो।
जब तपाइँ सबै क्रिप्टो क्यामेरा-सम्बन्धी रोजगारका अवसरहरूबारे सोच्नुहुन्छ। तपाइँ निश्चित रूपमा बिटककोइन क्यारियर वेबसाइटमा सोच्नु पर्छ। तिनीहरू क्रिप्टो आर्थिक बजारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हुन्। वास्तवमा, बजार छिटो बढ्दैछ। त्यसैले, तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ क्रिप्टक्रोसेंसी कार्य रिमोट निम्न वर्षमा धेरै छिटो छ। क्रिप्टक्रोसीसी समाचार बजार निश्चित रूपले वैश्विक समाचार वितरित गर्दैछ। विशेष रूपमा धेरै च्यानलहरूमा गति तोड्ने। यदि तपाइँ नौकरी खोज्दै हुनुहुन्छ भने क्रिप्टक्रोरेन्सी उद्योगमा। अब एक अविश्वसनीय छ एक सफल क्यारियर खोजकर्ता बनने समय.
अर्कोतर्फ, क्रिप्टक्रोसीसी कम्पनीहरू हामी पनि संदिग्ध भन्दा बढी छिटो बढ्दैछौं। नयाँ कम्पनीले हालका महिनाहरूमा क्रिप्टक्रोरेसी क्यारियर बजारमा अनौपचारिक लगानी र वृद्धि उत्पन्न गर्छ। र धेरै नयाँ प्रविधिको अझै पनि बढ्दै गएको छ। क्रिस्ट्रोसरेन्सी बजार सबैभन्दा ठूलो र छिटो बढ्दै गएको छ। Cryptocurrency रोजगारी गैर-कर्पोरेट स्टार्टअप अवसरहरूमा बढ्दैछ। एन्जिललेले अद्भुत व्यवस्थापन गरेको छ क्रिप्टोक्रोरेसी बजारको बारेमा रिपोर्ट गर्नुहोस्.
न केवल अधिक काम उपलब्ध छ, तर ब्लकचाईनसँग काम गर्ने स्थानले पनि राम्रो तिर्नेछ। औसत कर्मचारीहरूले गैर-क्रोटो कार्यहरूको तुलनामा 10-20 प्रतिशत भन्दा बढी वेतन प्रदान गरेका छन्।
क्रिप्टक्रोरेंसी फास्टिङ हुँदैछ
पैसा क्रिटोक्रोमेन्सी कम्पनीहरू र नयाँ स्टार्टअपहरूमा फिसिङ गर्दैछ। AngelList कम्पनी डेटाबाट, कम्पनीले 2018 को पहिलो भागमा देख्यो। र पत्ता लगाउनुहोस् कि क्रिप्टक्रोरेन्सी उद्योगमा लगानी छ अन्य बजारहरू भन्दा धेरै छिटो बढ्दै। साथै, 2019 मा क्रिप्टक्रोरेन्सी फर्महरू मा धेरै 2010 र 2016 संयुक्त तुलनामा धेरै पैसाहरू छन्।
दुबई सिटीमा यसको आफ्नै क्रिप्टक्रोसीसी कार्य बोर्ड छलफल छ। साधारणतया आर्थिक भविष्यको बारेमा बोल्दै क्रिटो विश्व दुबईमा। यद्यपि यो साँचो कीनोटको नयाँ र सबैभन्दा विशेष घटना हुन सक्छ। केवल सबैभन्दा प्रतिष्ठामा राखिएको थियो, लक्जरी दुबईमा, र व्यापार वातावरण Jumeirah Mina A'Salam.
एकै समयमा, क्रिप्टक्रोसीसी कम्पनीहरू बढ्दै छन् तर दुबईमा मात्र होइन। नयाँ फर्महरू मा ठूलो रकम बढाउँदै युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका धेरै उच्च मूल्य निर्धारणमा। त्यसोभए ती परिस्थितिमा, नयाँ कम्पनीहरु को भर्ती को शीर्ष प्रतिभा को खोज को आवश्यकता हो.
रोजगारी सूचीको कुल संख्या सामाजिक साइटहरूमा हरेक दिन बढ्दैछ। क्रिटोक्रोरेन्सी भर्ती कम्पनीहरू गत छ महिनामा पोष्टको संख्या दुरीमा छ। Cryptocurrency संयुक्त अरब अमीरात मा एक पागल जस्तै नौकरिहरु बढ्दै छन्.
कसरी प्राप्त गर्ने cryptocurrency मा काम?
काम खोजकर्ताहरूले यसको बढ्दो सुपर फास्टको कारण क्रिप्टक्रोसीसी बजारको आनन्द लिन्छन्। क्रिस्ट्रोरोरेन्सी छिटो बढ्दैछ र श्रमिकहरूको लागि लचीलापनलाई प्राथमिकता दिइन्छ.
अर्कोतर्फ, नयाँ एक्सटेन्टहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि ब्लकचेन-आधारित कम्पनीहरू भविष्यमा धेरै छिटो बढ्दै जान्छन्। उदाहरणका लागि, क्रिप्टक्रोसीसी कार्यहरू NYC स्टार्टअपहरू 25% ले रिमोट पदहरूलाई आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रस्ताव गर्न सम्भव छ। त्यसैले यदि तपाइँ रोजगारीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंसँग ब्लकचाईमा विशेषज्ञता छ। तपाईं यस उद्योगमा गैर-प्राविधिक कार्यहरूको उद्देश्य पनि गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणका लागि, तपाईं सक्नुहुन्छ मार्केटिंग र अपरेसन जस्ता धेरै पदहरूमा काम गर्दछ.
उच्च प्रविध शिक्षा आवश्यक छैन क्यारियर सुरू गर्न आवश्यक छ Bitcoin संग। वित्तीय बजारबाट नयाँ रिपोर्टहरूले संभावित कर्मचारीहरूलाई संकेत गर्दछ। नयाँ कार्यकर्ताहरूले मात्र अवधारणाहरू र रोप्टो बजार उद्योग टर्मिनोलोजीलाई बुझ्नै पर्छ। Cryptocurrency बजार मा एक नौकरी खोज गर्ने सबै भन्दा राम्रो तरिका। सामान्यतया बोल्न सिक्का एक्सचेन्ज कम्पनीहरूको लागी आवेदन छ।
ती चीजहरू जो कि क्रिप्टक्रोसीसीमा क्यारियर गर्न प्रतिबद्ध हुन्छन्। सधैँ CryptoCurrency बजारमा कार्यहरूको खोजी गर्न सक्दछ। त्यहाँ सधैं छ नयाँ क्यारियर शिकारीहरुको लागि विकल्प विकल्प को लागी रास्ता। उदाहरणको लागि, यदि तपाईं आफ्नो वर्तमान उद्योगबाट रोजगारी परिवर्तनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने। कोइला बिटकोइन उद्योगमा आवेदन गर्नु अघि तपाईले ब्लकचेन विकासकर्ता वा मार्केटिङ प्रबन्धकको रूपमा काम गर्न विचार गर्नुपर्दछ। त्यहाँ सधैँ क्रिप्टक्रोरेन्सी प्रविधिमा भविष्य हो।
दुबईको ब्लक चेनमा बढ्दो काम?
युएई एक पूर्ण परिचालन ब्लकचेन-संचालित सरकार बन्न कोशिस गर्दैछ। यसको मतलब यसका सबै सेवाहरू निश्चित रूपमा परिवर्तन हुनेछ, सहित भिसा अनुप्रयोगहरू, मनी ट्रान्सफर, मनी एक्सचेन्ज र पनि स्थानीय भुक्तान र इजाजतपत्र नवीकरण संग बिलि।।
यो संयुक्त अरब एमिरेट्स 2020 द्वारा पूर्ण परिचालन प्रणाली प्राप्त गर्न चाहन्छ यसैले एक नयाँ प्रविधि सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रहरुमा 50% उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बराबर छ। त्यो आधारभूत काममा कम समय खर्च, र युएई बजेटमा कम पैसा खर्च गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।
स्मार्ट दुबई वेबसाइट
नयाँ टेक्नोलोजी दुबईमा मात्र नभएर अबुधाबीमा पनि हुने देखिन्छ र सम्पूर्ण देशतर्फ सर्नेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा ब्लकचेन व्यवसायले यति धेरै पुरानो प्रणालीहरूलाई रूपरेखा दिनेछ। हामीलाई थाहा छ एउटा चीज यो निश्चित छ मध्य पूर्वमा जताततै उद्योग क्रान्ति गर्नुहोस् र केहि देशहरूमा जस्तै साउदी अरेबिया र कतारमा। एमिरेट्सले सधैं आफ्नो पुरानो प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दछ। र निश्चित रूपमा युएईले केहि बर्षहरूमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ केही प्रमुख क्षेत्रहरू घर जग्गा सम्पत्ति, पैसा स्थानान्तरण र भुक्तान प्रणाली हुनेछ।
व्यापारिक व्यक्तिहरू परिचय हुनेछ वास्तविक व्यवसाय सञ्चालनमा ब्लकचेन प्रविधि संयुक्त अरब अमीरात र सऊदी अरबमा। उदाहरणको लागि, भुक्तानी प्रणाली बचत गर्नुहोस् सुरक्षालाई बुझ्न र टेक्नोलोजीमा बढ्दो उपभोक्ता आत्मविश्वासको मद्दतमा एक लामो तरिकामा जान्छ।
अमीरातका सरकारी अधिकारीहरूले ब्लकचेन उद्योगमा कडा नियम बनाएका छन्। तिनीहरू सँधै सुनिश्चित हुनेछन् कि सबै लेनदेन सुरक्षित र सुरक्षित र पक्कै पूर्ण रूपमा ट्रयाक गर्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, तपाईं क्रिप्टप्क्रुरेसीको साथ केहि राम्रा चीजहरू छन्। तपाइँ बिटककोइन वा यहाँका लागि अपार्टमेन्टहरू खरिद गर्न र बेच्न सक्नुहुन्छ खेलकुदलाई बिटकोइनको लागि खरीद गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जब सम्म तपाईं आफ्नै क्रिटिट्रोरेन्सी हुनुहुन्छ जबसम्म तपाईं सक्नुहुनेछ।
Bitcoin संग रियल एस्टेट!
के संयुक्त अरब अमीरात ब्लकचेन को लागी तैयार छ?
युएई कम्पनीहरूले धेरै परियोजनाहरू, नयाँ स्टार्टअपहरू लिन शुरू गरिसकेका छन् यसको blockchain टेक्नोलोजी व्यवसाय प्रयोग गर्न। केही ठूला टेक कम्पनीहरूले डिजिटल मुद्रा जारी गर्न सुरू गर्दछन्। उदाहरण को लागी, मर्सिडीज को भुगतान स्वीकार गरे ग्राहकहरू र बिक्री प्रबन्धकहरू बीचको क्रस-सीमा कारोबार। अर्कोतर्फ, दुबई सरकार, सुरुवात र ग्लोबल टेक युनिभर्सिटीहरूले नयाँ अवसरलाई धेरै उच्च स्तरको व्यवस्थापन गर्दै। किनकि दुबईको महत्वाकांक्षी ब्लकचाई योजनाहरू विकासको नयाँ युगको शुरुवात हो।
क्रिप्टक्रोरसीसी र ब्लकचाईमा मात्र नकारात्मक पक्ष गोद लेने को प्रारम्भिक चरण हुन्। साथै, केही कम्पनीहरू जसले ग्राहकहरूलाई स्क्यान गर्न प्रयास गर्छन्। तर त्यो चाँडै अपेक्षित भन्दा कम हुनेछ।
Cryptocurrency Market मा कामका लागि आवेदन गर्ने शीर्ष वेबसाइटहरू - आज आवेदन गर्नुहोस्!
यहाँ लागू: https://coinmarketcap.com/careers/
CoinMarketCap नं। 1 पोर्टल हो जहाँ व्यक्तिहरू क्रिप्टोकुरन्सी मूल्यहरू जाँच गर्न सक्छन्। र क्रिप्टो ट्रेडरहरूको लागि विश्वको सबैभन्दा विश्वसनीय र डाटाको सही स्रोत। त्यहाँ केहि रोजगार प्रस्तावहरू छन् उदाहरणका लागि:
डेटा विज्ञान अभियंता
वरिष्ठ फर अन्जिन ईन्जिनियर
एसईओ र मार्केटिंग विशेषज्ञ
र अरु धेरै।
यो कम्पनीले हरेक दिन लाखौं व्यक्तित्वलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा राखेको छ।
व्यक्ति नयाँ क्रिप्टो विश्व संगठनहरू खोज्दै, र उत्तम एक्सचेन्ज प्लेटफर्म। CoinMarketCap पक्कै हुनेछ धेरै अधिक रोजगार प्रस्तावहरू विकास गर्नुहोस् अमेरिकामा मात्र होइन यस कम्पनीले सबैभन्दा अप-टु-डेट बजार मूल्यहरू र नयाँ जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा पूँजीकरण, मूल्य निर्धारण, र क्रिप्टोकरन्सी जानकारी ल्याउनेछ।
यहाँ लागू: https://jobs.bitcoin.com/
बिस्कको कम्पनी कम्पनी टोकियो, सेन्ट किट्समा कार्यालयहरूसँग विश्वव्यापी क्रिट्टोक्रोमेन्सी व्यवसाय हो। अर्कोतर्फ, कम्पनी यति छिटो बढ्दै छ कि उनी स्वीडेन र बुडापेस्टमा नयाँ अफिस गरिरहेका छन् र मुम्बई। बिटकोइन प्रतिबद्धताको वैश्विक उपस्थितिबाट बिटकोइनको भुक्तानी समाचार फैलाउने छ। यो कुराको साथमा, तिनीहरूले व्यापारको भित्र नयाँ कर्मचारीहरू र भविष्यका व्यक्तिहरूको लागि एक अपरिचित अनुभव सिर्जना गरेका छन्।
बिटकोन्स नियमित रूपमा विश्वभरका कर्मचारीहरु लाई नियमित रूपमा पठाउँछन्। उदाहरणका लागि दुबई र न्यूयोर्क शहरमा नयाँ स्थानहरूको अनुभव गर्न। उनीहरूलाई भेट्न दिनुहोस् उद्योग वित्तीय नेताओं, र नयाँ कर्मचारीहरु लाई मदद सेमिनारहरूमा उपस्थित हुनुहोस्। बिटकोइन कार्यकारीहरू सधैं नयाँ कर्मचारीहरूलाई सुन्नुहोस् र अरूसँग कुराकानी गर्न फर्केर हेर्छन्। कम्पनीले संसारभरको होस्ट घटनाहरू प्रायोजक गर्दछ। जबकि Bitcoin.com को लागि काम गर्दै, तपाइँ नयाँ जोडीहरू प्राप्त गर्न निश्चित हुन सक्नुहुन्छ। अनि निस्सन्देह, तपाईंसँग तपाईंको पासपोर्टमा नयाँ चेकआउट हुनेछ।
नकारात्मक पक्षमा, एक वर्षको कर्मचारी एकपटक हाम्रो सम्पूर्ण कम्पनी सेन्ट किट्समा उड्छ। त्यहाँ तिनीहरू सँगसँगै काम गर्दै छन्, एक-अर्कालाई भेट्न पनि संयुक्त अरब अमीरात देखि अधिकारियों। व्यापार भित्र कार्यान्वयनहरू र नयाँ उत्पादनहरूको बारेमा कुरा गर्न मनपर्छ जुन उनीहरूको सुरुवात गर्ने योजना हो। सबैभन्दा लोकप्रिय Cryptocurrency नौकरिहरु उपलब्ध गराउँछ बिटकोइन आज लागू हुन्छ।
यहाँ लागू: https://consensys.net/careers/
इथेरियम दोस्रो दोस्रो पहिचानयोग्य क्रिप्टक्रोसीसी हो। ईथरम टोलीले यो क्रान्तित्मक प्लेटफार्म बनाउँछ जसले ब्लकचेनलाई "स्मार्ट अनुबंध" को अवधारणा ल्यायो। तर अर्को केहि वर्षमा उनीहरूले कम ऊर्जा लिने केहि चीज खोज्दैछन्। यो क्रिप्टसुरक्षा पहिलो जुलाई जुलाई 2015 मा सक्रिय हुन्छ। र युवा प्रोग्रामर एक 21 वर्षीय विटिटिक बिरिनले यो ब्लकचेन्ज प्रणाली सिर्जना गर्यो।
हामी सबैले देख्यौं कि Ethereum cryptocurrency द्रुत रूपमा अस्पष्टताबाट क्रिप्टोकरन्सी सेलिब्रेटी स्थितिमा उग्यो। तल त्यहाँ एक वेबसाइट छ जुन तपाईले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ईथरम क्रिप्टोकरन्सीमा कामको लागि।
यहाँ लागू: https://ripple.com/company/careers/
यस कम्पनीको निश्चित रूपले हाम्रो सूचीमा 3rd स्थान छ। विश्वभरका रोजगार खोजी गर्नेहरूले त्यहाँ धेरै पदहरूको लागि आवेदन दिन सक्छन्। यस कम्पनीले पहिले नै विशाल ब्रान्डहरू जस्तै सान्तेन्डर र मनी ग्रामको साथ काम गरिरहेको छ, तल हेर्नुहोस्। यो फर्म निश्चित रूपमा वर्ग डिजिटल सम्पत्तिको लागि उत्तम हो
दुबई भविष्य फाउंडेशन
यहाँ लागू: https://careers.dubaifuture.gov.ae/
क्रिटोक्रोसीसी र ब्लकचेन टेक्नोलोजीको लागि सरकार सम्बन्धित परियोजना। जानिन्छ दुबई भविष्य फाउंडेशन नयाँ टेक्नोलोजी व्यवसायको भविष्यलाई आकार दिन बलियो मनसायले स्थापित गरिएको थियो। सम्पूर्ण संगठन संयुक्त अरब अमीरातमा रणनीतिक क्षेत्रहरूसँग काम गर्दै। र निश्चित सहयोग र कडा परिश्रमका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रहरूको लागि। हुनेछ तपाईंलाई आफ्नो क्यारियर र रोजगार उपलब्धिहरूमा अझ उच्च प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ.
यहाँ लागू: https://www.blockgemini.com/careers.html
अर्को अरब कम्पनीले काम गर्नका लागि उनीहरूले व्यवसाय विकास अधिकारी र साइबरसुरक्षा अपरेटिर्सलाई काममा लिइरहेका छन्। एक कम्पनी को दुबई मा2कार्यालयहरु र भारत मा एक कार्यालय छ। निश्चितको लागि दुबईमा आवेदन दिन लायक छतथापि, भारतमा धेरै प्रेमी ज्याला हुन सक्छ।
यहाँ लागू: www.adabsolutions.com
Adab समाधान कम्पनी पहिलो इस्लामी क्रिप्टो एक्सचेंज (FICE) को रूप मा चलाइन्छ। कम्पनी विश्वको पहिलो मात्र होईन शरियाकम्प्लियन्ट क्रिप्टो एक्सचेन्ज तिनीहरू वास्तवमा शारजाह बैंकहरूसँग सहयोग गर्छन्।
यसबाहेक, कम्पनी इस्लामी कानूनको साथ पूरै अनुरूप छ। र निश्चित रूपमा यदि तपाईं एक मुस्लिम व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, तपाईंले गर्नु पर्छ दुबई-आधारित कम्पनीको लागि तपाईंको क्यारियरको पहिलो छनौटको रूपमा आवेदन दिनुहोस्। कम्पनीको ठूलो योजनाहरू छन्, उदाहरण को लागी Adab टोकनहरू जारी गर्न खोज्दै। त्यसोभए, एक राम्रो कम्पनी मात्र हैन तर ठूलो क्षमताको साथ।
कम्पनी अत्यधिक प्रेरित छ मध्य आकारको क्षेत्रमा ठुलो व्यवसाय गर्न तिनीहरूको आकार बढाउनुहोस्। र हामी सबैलाई थाहा छ कि दुबई अहिले इस्लामिक फाइनान्सको क्षेत्र निर्विवाद केन्द्र हो। तिनीहरूसँग काम पाउन तपाईंले आफ्नो सीभीको साथ ईमेल पठाउनु पर्छ।
यहाँ लागू: https://www.coinbase.com/careers
सिक्काबेस कम्पनी निश्चित रूपले क्रिप्टोकरन्सीमा पैसा परिवर्तन गर्नका लागि उत्तम क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो उदाहरणका लागि बिटकॉइन र मोनिरो। यस कम्पनीको लागि मात्र नकारात्मक पक्ष स्थित छ। अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्नियामा मुख्यालय भएको कम्पनीले, त्यहाँ काम पाउन भिसा प्रक्रियाको कारण धेरै गाह्रो छ अमेरिका मा। तर अझै Coinbase मा CV पठाउन स्मार्ट आन्दोलनको हुनु पर्छ।
Coinbase कम्पनी पनि एक उच्च मूल्या rated्कन कम्पनी हो गुगलमा र फेसबुकमा। केवल किनभने तिनीहरूले एक अद्भुत मार्केटिंग टीम भाँडामा लिएका छन्।
यहाँ लागू: https://bitpay.com/about/team
Bitpay कम्पनीको साथ तपाईंले भुक्तानीको भविष्य निर्माण गर्नुहुनेछ। तिनीहरूसँग धेरै अनन्य वेबसाइट रहेको पाईएको प्यानल र पैसा हस्तांतरण गर्न USD बाट BTC बाट अति सजिलो छ। BitPay कम्पनी क्रिस्ट्रोरेन्सीमा आधारित आधारभूत संरचना निर्माण गर्दैछ।
तिनीहरू ग्राहकहरू र प्रयोगकर्ताहरूका लागि बिटकोइनको खुल्ला स्रोत प्लेटफर्मलाई बलियो बनाउँदै छन्। लक्ष्य विश्वको लागि बिस्कुट ल्याउनको लागि हो। बिटपे बैंक कार्डको साथमा मानिसहरूलाई सहयोग गर्न र ब्लकचाई व्यवसायको लागि यो धेरै सजिलो बनाइयो।
यहाँ लागू: https://angel.co/coinswitch-co/jobs
सिक्का स्विच कम्पनी मुख्यतः भारतबाट ईन्जिनियरहरूको टोली द्वारा स्थापित गरिएको छ। तिनीहरू अमेजन, माइक्रोसफ्ट र Zynga बाट मात्र संसारको सबैभन्दा राम्रो र तीव्रतम काम गर्ने क्रिप्टक्रोरेन्सी एक्सचेंज प्लेटफर्म र ब्लकचेन टेक्नोलोजी द्वारा विकृतकृत 100% निर्माण गरिसकेको थियो।
सिक्कि स्विचले क्रिप्टो बजारमा सर्वोत्तम विनिमय दर प्रदान गर्दछ, उनीहरूले सबै प्रमुख व्यापारिक आदानप्रणालीहरू समेटेर व्यवस्थापन गर्छन्।
तिनीहरूसँग पनि भुक्तानीको राम्रो प्रणाली रहेको छ र तिनीहरूलाई वास्तविक समयमा अन्य कम्पनीहरूका सिक्का स्विचसँग तुलना गर्ने सबैभन्दा उत्तम हो। यद्यपि उनीहरूसँग कुनै पनि छैन क्यारियर पृष्ठ तर तपाईं एन्जलकब वेबसाइटमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीले 250 क्रिप्टो करन्सी र 45,000 भन्दा बढी जोडी एक्सचेन्जको लागि समर्थन गर्दछ। यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै नयाँ पदहरू हुनेछन्।
यहाँ लागू: https://www.careers.coinmama.com
Coinmama cryptocurrency विनिमय प्लेटफर्म एक नवीन र द्रुत-बढ्दो कम्पनी हो। यो संगठन इजरायली प्रसिद्ध स्टार्टअप कम्पनी बन्न। र निश्चित रूपमा, किनकि तिनीहरूले यो क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गरे 2013 मा र रानामा अवस्थित। उच्च मूल्या rated्कन गरिएको कम्पनी बन्नुहोस्। जब तपाईं ब्लकचेन क्यारियर र क्रिप्टो-मुद्रा ट्रेडिंग अनुभव शुरू गर्नुहुन्छ तपाईंलाई थाहा हुनेछ यो व्यवसाय कत्तिको लोकप्रिय छ।
182 भन्दा बढी देशहरूमा ग्राहकहरूलाई समाधान प्रदान गर्दै कोइनमामा। र अवश्य पनि, तपाईं तिनीहरू दुनिया मा कुनै पनि स्थान बाट लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यस संस्थाले छिटो, प्रभावशाली र सबैभन्दा सुरक्षित विनिमय सेवाहरूको साथ विनिमय सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
यहाँ लागू: https://www.cointiger.com/en-us/#/recruit
सिक्का बाघ यो द्रुत तरीकाले ट्रेडिंग क्रिप्टोकरन्सीको लागि आश्चर्यजनक क्रिप्टोकरन्सी विनिमय प्लेटफर्म हो। CoinTiger कम्पनी एक शीर्ष-स्तर blockchain सेवा सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छ। उदाहरण को लागी, तिनीहरू संग अनलाइन कुराकानी समर्थन र उच्च गुणवत्ता प्लेटफर्म छ प्रयोगकर्तालाई अन्तिम अनुभव प्रदान गर्न blockchain टेक्नोलोजी संग ट्रेडिंग को।
सिक्का बाघ एक द्रुत ग्रोथ संगठन हो र यदि तपाईं ब्लकचेन उद्योगमा रुचि राख्नुहुन्छ र सहि सीपहरू राख्नुहुन्छ भने तपाईं एक रोजगार प्रस्ताव हुन सक्छ तिनीहरूबाट त्यो निश्चित छ।
यहाँ लागू: https://www.luno.com/en/careers
लेनो अर्को राम्रो कम्पनी हो र तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मा केहि सयौं मानिसहरूलाई काममा लिइरहेका छन्। यस समयमा उनीहरूको केप टाउन, लन्डन र सिंगापुरमा खाली पदहरू छन्। निश्चित रूपमा काम पाउँदै यो कम्पनी संग तपाईंको क्यारियर मा एक राम्रो विकल्प हो.
क्रिप्टप्कोसेंसी एक्सचेन्ज एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको रूपमा उनीहरूलाई क्रिप्टक्रोमेन्सीहरू जस्तै बिस्ककोइन र इथेरियम, मोनेरो बुझ्न मद्दत गर्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय परिदृश्यमा छिटो परिवर्तन गर्दै छन्।
यदि तपाईं काम खोज्दै हुनुहुन्छ र ब्लकचेन बजारको विविधताको बलमा विश्वास गर्नुहुन्छ। तपाईं नयाँ टीम कार्य निर्माण र उत्कृष्टताको लागि निरन्तर खोज बनाउन सक्नुहुन्छ।
यहाँ लागू: https://jobs.lever.co/bitpanda
बिटपान्डा शीर्ष-रेटेड क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरूको बीचमा पनि क्रमश: अहिलेसम्म कम्पनीले युरोपियन युनियनमा अष्ट्रियामा भाडामा लिइरहेको छ। त्यसो भए यस कम्पनीमा काम गर्दै तपाईंले भिसाका लागि आवेदन दिनै पर्छ वा अन्तर्वार्ता प्रक्रिया पास र प्रायोजन भिसा प्राप्त गर्न।
बिटप्यान्ड पक्कै पनि एक यूरोपको अग्रणी रिटेल सबैभन्दा भ्रमण गरिएको ब्रोकर हो। सबै संसारका मानिसहरु बिटकॉइन, Ethereum, IOTA र अधिक खरीद र बिक्री गर्दै छन्। यो कम्पनी छिटो, सुरक्षित र 24 /7हो कामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी.
यहाँ लागू: https://careers.plus500.com/
संसारको सब भन्दा पुरानो क्रिप्टो मेशिन मध्ये एक। इजरायलबाट व्यवस्थापन तसर्थ, निश्चित रूपमा कम्पनी तिनीहरूलाई दिन लायक छ विकासको लागि एक मौका। कम्पनीलाई 2013 मा रकम प्राप्त भएको थियो र लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा यसको सेक्शन रहेको छ। तपाईंले पक्कै पनि तिनीहरूको बारे एक नजर राख्नुपर्दछ क्यारियर वेबसाइट किनभने तिनीहरू बेलायतमा मात्र होइन नयाँ नयाँ रोजगार प्रस्तावहरू अपडेट गरिरहेका छन्
यहाँ लागू: https://jobs.lever.co/kraken
करेन युवा मानिसहरुका लागि निर्मित कम्पनी हो जसले ब्लकचेन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दैछन्। काम Kraken संग मात्र भयानक छ। सकारात्मक पक्ष मध्ये एक टाढा टाढा राख्नु हो। त्यसो भए तपाई टोकियो, दुबई र लन्डनमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। डिजिटल सम्पत्ति र ग्राहकहरूको सेट र पोर्टफोलियो। पक्कै पनि तपाईंलाई देखाउँदै तपाईसँग लामो रोजगारको अवसर हुनेछ.
अर्को राम्रो कुरा के हो भने क्राकेन क्रिप्टो व्यवसाय सोशल मीडियामा विस्तारपूर्वक बढ्दैछ। तिनीहरू नयाँ जागिर खोज्नेहरूको धेरै खोजी गरिरहेका छन् थोरै टेक सीपहरूको साथ। त्यसोभए, मार्केटिंग र प्रत्यक्ष च्याटको बिक्री सँधै इन्द्रिय बनाउँदछ।
यहाँ लागू: https://shapeshift.io/careers
शेपशिफ्ट केवल क्रिप्टोकरन्सी प्लेटफर्म मात्र होइन। तिनीहरू अग्रणी गैर-संरक्षक डिजिटल सम्पत्ति प्लेटफर्म हुन्। संसारभरका व्यक्तिहरू आफ्ना डेटा र उपकरणहरू प्रयोग गरेर आफ्नै क्रिप्टोकरन्सी प्लेटफर्म निर्माण गर्न। 2014 मा, शेपशिफ्ट लगभग नयाँ युगको अग्रगामी बन्नुहोस् डिजिटल वित्त र cryptocurrency डेटा को। शेपशिफ्ट आईटी व्यवसाय प्रबन्धकहरू, कम्प्युटर प्रोग्रामरहरू र टेक्नोलोजी विकासकर्ताहरूको लागि धेरै राम्रो कम्पनी हो।
यहाँ लागू: https://jobs.cointelegraph.com/
उनीहरूसँग अब नयाँ सेक्सनहरू छन्, सिक्का टेलिग्राफको साथ कामहरू। तपाई धेरै क्षेत्रहरूमा हजारौं रोजगारको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाइँ इच्छुक रोजगार प्रस्तावहरू प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले तिनीहरूको वेबसाइट सेक्सनमा आवेदन दिनुपर्दछ। यस कम्पनीले केवल क्रिप्टो ट्रेडिंग को बारे मा लेख गर्न को लागी व्यवस्थापन, पीरोभिडिंग समाचार र भर्खरको जानकारीले रोजगार खोजी गर्नेहरूलाई आवेदन दिन अनुमति दिँदै blockchain टेक्नोलोजी वातावरण मा सबै भन्दा राम्रो रोजगार को लागी।
अब तपाईं तिनीहरूको अनुपम प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिप्टो बजारमा पनि अपडेट गरिएको र क्रिप्टो सम्बन्धित रोजगार रिक्त स्थानहरू फेला पार्नुहोस्। तपाईं साँच्चै गर्न सक्नुहुन्छ रोजगार अवसरहरूको एक सूचीको साथ प्राप्त गर्नुहोस् blockchain व्यापार भित्र। यसबाहेक, सबै भन्दा राम्रो फिन्टेक र क्रिप्टो उद्योग प्रकारहरू हुन् तिनीहरूको वेबसाइटमा रोजगार पोस्ट गर्दै.
यहाँ लागू: https://request.network
यो कम्पनी अद्भुत छ, र मानक बजारलाई नयाँ कुरामा बदल्नुहोस्। अनुरोध गरिएको सञ्जाल यो ई - वाणिज्य व्यवसायको भविष्य जस्तो देखिन्छ। कम्पनी भुक्तान अनुरोधहरूको लागि डेन्टेन्ट्रीकृत नेटवर्कमा व्यवस्थापन गर्दछ र नयाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै पहुँचयोग्य बनाउनुहोस्।
यहाँ लागू: https://localbitcoins.com/careers
LocalBitcoins.com उन्नत टेक आईटी विशेषज्ञहरूको लागि राम्रो कम्पनी हो। किनभने अनुमति दिन्छ नयाँ मानिस कम्पनी भिजन र संरचनाको साथ तिनीहरूको दृष्टिकोण आदान प्रदान गर्न। यो कम्पनी, अर्कोतर्फ, स्थानीय क्रिप्टोकरन्सी बजारमा र बिटकॉइन ब्लक टेक्नोलोजीमा काम गर्दै।
स्थानीय बिटकोन्सहरू धेरै सेवाहरू छन्। विश्वभर सबै ब्लकचेन टेक्नोलोजीको निरन्तरता प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै। यो कम्पनी सेवा Bitcoin अर्थव्यवस्था को नींव मध्ये एक हो।
यदि हामीले यस कम्पनीलाई लिन्छौं र हामी अरूहरूसँग तुलना गर्छौं भने हामी बुझ्नेछौं कि LocalBitcoins.com 2012 मा स्थापना भएको हो र आजकल 4000-5000 नयाँ रेजिष्ट्रेसनहरू प्रत्येक दिन प्राप्त गर्दैछौं। त्यो हामीलाई दिदैछ बीमा कि क्यारियर प्रगति भविष्य मा जारी रहनेछ.
यहाँ लागू: https://www.gemini.com
मिथुन क्रिप्टो एक्सचेंज न्यु योर्क, अमेरिकामा आधारित एक आधिकारिक एक्सचेन्ज हो। र धेरै स्टॉकब्रोकरहरू पहिले नै त्यहाँ काम गरिरहेका छन्.
यद्यपि, मिथुनले संयुक्त राज्यमा क्रिप्टप्टोरेन्टहरू मात्र व्यापार गर्दछ। यूएस डलरबाट, बिटकोइन र ईथरियोम। त्यसैले यस कम्पनीमा काम गर्नको लागी, तपाईसँग पनी प्रबन्धकहरू, निर्देशकहरूको बजार, उत्पादन प्रबन्धकहरू र इन्जिनियर्सहरू मार्फत तपाईसँग अमेरिकी कम्पनीको भिसा हुनुपर्छ।
डिजिटल सम्पत्ति डेटा
यहाँ लागू: https://www.binance.com/Careers.html
यो पोर्टल पनि तिनीहरूको रोजगार खोज्नेहरूको लागि राम्रो रोजगार प्रस्ताव प्रदान गर्दछ। कम्पनी ब्यवस्थापकहरु संग केहि उच्च रेटिंग को समीक्षा छ। केवल किनभने तिनीहरू ट्रेडिंग भोल्युम पुन: आकार दिइरहेका छन् उनीहरूको धेरै ट्रेडिंग क्रिप्टोकरन्सी। Biance यो संग काम गर्न को लागी एक धेरै चासो कम्पनी हो।
कम्पनीसँग ठूलो काम जीवन सन्तुलन छ र निश्चित रूपमा बिन्नका लागि काम गर्ने क्रममा तपाइँ प्रचारित हुन सक्नुहुन्छ। र अवश्य पनि, यो फर्मसँग उनीहरूको ग्राहकहरूको लागि खरीदका लागि सिक्काको एक विशाल रकम उपलब्ध छ। त्यसो भए, मूल रूपमा, यदि तपाइँ राम्ररी बिटकोइन्स र मोनिरो वा इथरम क्रिप्टो बजार जान्नुहुन्छ भने। तपाईंले गर्नु पर्छ निश्चित रूपमा यस कम्पनीको साथ काम प्राप्त गर्न कोसिस गर्नुहोस्.
यहाँ लागू: https://lightning.engineering/careers.html
प्रकाश ल्याब्स कम्पनी ईन्जिनियरिङ्हरूको टोली द्वारा निर्मित गरिएको छ जुन क्रिप्टोग्राफीको बारेमा जुनसुकै रूपमा डेभ्रेटरीकरण र सुरक्षा र गोपनीयता संग क्रिटोक्रोरेसीसी हो। अनुभवी प्रणाली सफ्टवेयर इञ्जिनियरहरूको लागी अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिमा लागू क्रिप्टोग्राफी अनुभवको साथ कार्य।
यस फर्मले साइफरपंक्ससँग संघर्ष गरिरहेको छ र नैतिक प्राविधिक गहराई र कल्पनालाई ब्लकचेन व्यवसायमा ल्याउने प्रयास गर्दैछ। त्यसोभए, यदि तपाईं ब्लाकचेन बजार भित्र सुरक्षा कम्पनीको प्रकारको साथ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया उनीहरूको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् र आफ्नो वेबसाइटमा उपलब्ध स्थितिहरूमा लागू गर्नुहोस्।
यहाँ लागू: https://international.bittrex.com/
बिट्रेक्स भर्खरै काम गरिरहेको छ जुन तिनीहरूले 10 कार्यहरू प्रदान गरेका छन्। व्यवसाय प्रस्ताव सल्लाह विश्लेषकले मुख्य वित्तीय अधिकारीलाई अपग्रेड गर्ने काम प्रस्तावबाट एकदम फरक छ।
कम्पनी यस समय संयुक्त राज्य अमेरिका मा भर्ती गर्दैछ। त्यसैले, तपाईलाई ब्लकचाई र वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो अनुभव नभएसम्म त्यहाँ पुग्न कठिन हुन सक्छ।
यहाँ लागू: www.komodoplatform.com
कोमोडो कम्पनीले अहिले थुप्रै पदहरूमा भर्ती भएका मानिसहरूलाई पनि काममा लगाइरहेको छ। तिनीहरू अझै पनि व्यवसाय विकासको प्रारम्भिक प्रक्रियामा छन्। तर यदि तपाईं एक खुला स्थिति देख्नुहुन्न जुन तिनीहरूको वेबसाइटमा तपाईंको अनुभवमा उपयुक्त छ। तपाईंले आफ्नो सीभी पठाउनु पर्छ यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंसँग उनीहरूको टीम प्रस्ताव गर्न मूल्यवान सीप छ।
यहाँ लागू: https://www.simplex.com/join-us/
कम्पनी जो एक धोकामा लड्दै छ। सिम्प्लेक्स कम्पनी क्रिप्टोकरन्सी परिवर्तन गर्नका लागि द्रुत तरीकाको रूपमा परिचित छ। यस कम्पनीको व्यवस्थापन स्मार्ट भन्दा बढि छ। उनीहरूको लागि पहिलो विकल्प छनौट ई-वाणिज्य, धोखाधडी र ब्लाकचेन टेक्नोलोजीमा सुरक्षा प्रणाली समेकित गर्न।
तिनीहरू बिस्कुट र ईथरम भिजुअलबाट प्रेरित हुन्छन् जुन उत्तमका लागि भुक्तान प्रक्रियाको संसार परिवर्तन गर्दै छन् (र सुरक्षितका लागि)। त्यसैले, उनीहरूको वेबसाइटमा आवेदन गर्नुहोस्। आशा छ कि तपाईं यस कम्पनीबाट पुनः खेल्न पाउनुहुनेछ।
यहाँ लागू: https://kufun-limited.breezy.hr/
कु सिक्का मात्र साधारण बिटकोइन र केही अन्य क्रिप्टोकरन्सी विनिमय प्लेटफर्म हो। तिनीहरूसँग धेरै लेनदेन र सबै सीमहरू छन् उनीहरूका कामदारहरूका लागि धेरै राम्ररी काम गर्दै.
कु सिक्का एक कम्पनी हो जहाँ तपाईं टाढा टाढा कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, निश्चित रूपमा भिसा बिना अन्तर्राष्ट्रिय कामदारहरूको लागि राम्रो। तिनीहरूको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् र चाखलाग्दो रोजगार प्रस्तावहरूको लागि आवेदन दिनुहोस्।
यहाँ लागू: https://www.bitwala.com/careers/
तिनीहरू धेरैलाई काममा लिइरहेका छन् र तिनीहरू जर्मनीका हुन्। तपाईं आफ्नो सपना वास्तविकतामा आउन सक्नुहुन्छ बिटवाला संग। तपाईं विशेषज्ञहरूको तिनीहरूको अद्भुत टोलीसँगै बैंकि banking पुन: आविष्कार गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूको कम्पनी द्वारा प्रस्तुत आश्चर्यजनक सेवाहरु को उच्च मापदण्ड को लागी। उदाहरण मध्ये एउटा जर्मनीमा आफ्नै बैंक खाता र त्यससँगै डेबिट कार्ड हो।
यहाँ लागू: https://bitoasis.net/en/front/career/
बिट ओएसिस कम्पनीले रोजगार खोजी गर्नेहरूलाई नयाँ प्रकारको क्रिप्टोकरन्सी संसारमा सामेल हुन मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं बिटकॉइन वा कुनै अन्य मुद्रामा रूचि राख्नुहुन्छ भने। यसबाहेक, यदि तपाइँ उभरिएको ब्लकचेन बजारमा सम्भाव्यताको बारेमा उत्साहित हुनुहुन्छ। बिटोआसिस युएई भित्र काम गर्न पनि यो राम्रो कम्पनी हो.
बिट ओएसिस दुबई र अबु धाबीमा भर्ती भइरहेको छ। तपाईं यस कम्पनीको साथ दुबईमा धेरै बिटकइन परियोजनाहरूमा योगदान गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाइँ जारी गर्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँसँग एक अद्भुत GitHub प्रोफाइल छ। र अवश्य पनि, लिंकडेनले क्रिप्टोकरन्सीलाई औंल्याए। यस कम्पनीको साथ धेरै राम्रो पोइन्ट त्यो हो भाँडामा लिने स्थानमा तिनीहरूको लागि फरक पर्दैन। मात्र आवश्यकता तपाईंको उत्कृष्ट कौशल र अनुभव हो।
यहाँ लागू: www.loyal.com/careers
लोयाल प्लेटफर्म दुबईमा आधारित द्रुत गतिमा विकास भइरहेको छ। र कम्पनी त्यो हो कि यसको blockchain- आधारित छिटो बढेको मध्यम तरीकामा दुबई टेक्नोलोजी.
लुयौंली कम्पनी ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा वफादार कार्यक्रमहरूको संसारलाई टोकन गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। साथै, तिनीहरू पहिल्यै ग्राहकहरूको रूपमा शीर्ष फॉर्च्यून 500 फर्महरू (जस्तै आईबीएम र डेलोइट) सँग सहकार्य गरेको छ।
यहाँ लागू: https://cobinhood.com/careers/
काम गर्न धेरै राम्रो कम्पनी र तिनीहरूसँग विशेषज्ञको कुशल टोली रहेको छ। अहिले कम्पनी आईटी प्रबन्धकहरूको साथसाथै कुशल प्रोग्रामरहरूको खोजीमा छ। यसबाहेक, कम्पनी हो Expats को लागी खोलियो र वास्तवमै घर भित्र नयाँ रिक्त पदहरू भर्ने बारे हेर्दै।
यहाँ लागू: https://0xcert.org/jobs
धेरै रुचि कम्पनी युरोप बाट ताजा। कम्पनी कोर टीम स्लोभेनियामा आधारित छ। त्यसोभए, प्रायजसो अवस्थामा तपाईसँग एक युरोपेली संघ पासपोर्ट हुनुपर्दछ। तर यस कम्पनीको व्यवस्थापनले सुपर कुशल र सुपर स्मार्ट व्यक्तिलाई बुझ्दछ विदेशमा बस्दा उदाहरणका लागि यदि तपाईं पाकिस्तान वा भारतबाट हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग काम गर्न सक्दछ। निस्सन्देह, अन्य देशहरु लाई पनि मानिन्छ, त्यसैले दूरस्थ काम तपाईंको लागि अधिक भन्दा बढी छ।
यहाँ लागू: www.leewayhertz.com/careers/
हामी एउटा द्रुत-बढ्दो मोबाइल अनुप्रयोग विकास कम्पनी हो जुन 2007 मा स्थापना भयो र सान फ्रान्सिस्कोमा मुख्यालय छ, इरभिन, शिकागो र नयाँ दिल्लीमा उपग्रह कार्यालयहरू सहित। हाम्रो टीम पुरस्कार विजेता डिजाइनर र आश्चर्यजनक कुशल विकासकर्ताहरू समावेश गर्दछ जुन सिर्जना गर्दछ उन्नत उद्यम-गुणवत्ता अनुप्रयोगहरू हामी आफैंलाई सँधै सुन्दर र सहज उपयोगकर्ता ईन्टरफेस प्रदान गर्न सक्षम भएकोमा गर्व गर्दछौं। हामीले 400 मोबाइल अनुप्रयोगहरू डिजाइन, विकास र डेलिभर गरेका छौं, र यो हाम्रो कहानीको शुरुवात मात्र हो: हाम्रो सपना धेरै ठूलो छ।
यहाँ लागू: www.nemjobs.com
ब्लक दल टेक्नोलोजीले पारंपरिक डेटाबेसको तुलनामा लेनदेनको सुरक्षित खाता कायम गर्न मौलिक रूपमा सुव्यवस्थित विधि प्रदान गर्दछ। यो कम्पनीले कम योग्य सदस्यहरूका लागि धेरै पेशकश प्रस्ताव गरेको छ। तपाइँसँग आधारभूत रोजगार प्रस्ताव हुन सक्छ, यो केहि भन्दा राम्रो छ।
आईबीसी अन्तर्राष्ट्रिय ब्लकचेन परामर्श
यहाँ लागू: www.ibcgroup.io
अर्को राम्रो कम्पनी एक कर्मचारी को रूप मा काम गर्न। यस संस्थाको साथ तपाईले क्रिप्टोकरन्सी बजारमा निश्चित रूपमा आवेदनको सफलता दर बढाउनुहुनेछ। तर, त्यहाँ एक नकारात्मक पक्ष छ, तपाईले क्रिप्टोकरन्सी रोजगार र ब्लकचेन क्यारियर उपलब्धिहरूसँग सम्बन्धित कामको लागि कार्यको ठूलो मागको लागि नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। IBC अनिवार्य रूपमा दुनिया भरबाट कुनै पनि इच्छुक रोजगार खोज्नेहरूको लागि रोजगार अवसरहरू छन्। र हो, क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्र र बढ्दो बजार भित्र, यस मञ्चको लागि टाढा धेरै नयाँ कर्मचारीहरू गरिनेछ। प्रयास गर आवेदन दिनुहोस् र तपाइँ पनि रोजगार अवसर पाउनुहुनेछ तपाईंको ईमेल इनबक्समा।
Wachsman मा क्यारियर
यहाँ लागू: https://wachsman.com/careers/
ध्यानको अर्को क्रिप्टो फर्म। वाचसमैन मा, तपाईंसँग विभिन्न प्रकारका रोजगार प्रस्तावहरू हुन सक्छन्। कम्पनी प्रबन्ध टोली blockchain र cryptocurrency वातावरण मा अग्रणी कम्पनीहरु को प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो कम्पनी अमेरिका, युरोप र एसिया, सिंगापुरमा ठुलो स्तरमा काम गर्दैछ।
कम्पनी विस्तारपूर्वक बढ्दै छ र 30 भन्दा बढि रोजगार प्रस्तावहरू हालै राखिएको थियो। तिनीहरू ब्लकचेन व्यवसायमा ज्ञानको साथ क्यारिज्म्याटिक आविष्कारकहरू सक्रियतासाथ खोजिरहेका छन्। त्यसो भए, यदि तपाईं एक धेरै बुद्धिमान व्यक्ति हुनुहुन्छ र जोखिम लिने रोजगार प्रस्तावहरूको खोजी गर्दै। तपाईंले आफ्नो सीभी प्रयोग गर्नु पर्छ र वाछमान कम्पनीमा महत्वाकांक्षी नेतामध्ये एक बन्नु पर्छ र उनीहरूको कम्पनीमा सामेल हुनुहोस्।
डिजिटल वाणिज्य चैंबर
यहाँ लागू: https://digitalchamber.org/careers/
चैंबरको डिजिटल वाणिज्य एक धेरै चासो कम्पनी हो किनभने तिनीहरू क्रिप्टो व्यापार गर्दै छैनन्। तिनीहरू डिजिटल वाणिज्यको प्रमुख र चैंबरमा ब्लकचेन वकिल कम्पनीको अधिक छन् !. यदि तपाई अमेरिकामा आधारित हुनुहुन्छ भने काम गर्न धेरै चासो फर्म
चेम्बर अफ डिजिटल कमर्सको कलेज र स्नातक-स्तर विद्यार्थीहरूको लागि उद्घाटन छ नयाँ क्यारियर साहसिक कार्य गर्न उनीहरूको वाशिंगटन, डीसी अफिसमा। हामीले मात्र इन्टरनेशन प्रोग्राम पाएका छौं।
यहाँ लागू: https://bitflyer.com/en-jp/recruit/
BitFlyer जोश र संख्याको साथ एक कम्पनी हो। व्यवस्थापन बोर्ड सदस्य व्यवसाय र व्यक्तिसँग अनुभव ल्याउनेछ। उनीहरूका कामदारहरू धेरै फरक पृष्ठभूमि र राष्ट्रियताबाट आएका हुन्छन्। तिनीहरू टोकियोमा काम गरिरहेका छन् र हालसालै उनीहरूको नयाँ अफिसमा सारिएका छन् जहाँ उनीहरूसँग काम गर्न धेरै मानिसहरूलाई प्राप्त हुनेछ।
BitFlyer कम्पनी छ लगभग कुनै योग्य व्यक्ति को लागी धेरै नयाँ रोजगार को प्रस्ताव। कर्पोरेट नेताहरूबाट बिक्री विभागमा मानक कामदारहरू।
यहाँ लागू: www.boscoin.io
Blockchain भविष्य यहाँ छ। बस सिक्का राम्रो प्रणालीको लागि सम्पूर्ण बजार परिवर्तन गर्दैछ। भविष्यको मूल BOScoin हो। कम्पनीले प्रयोगकर्ताहरूलाई ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा मद्दत गर्दैछ। उनीहरू चुनौती खोज्नेहरूको खोजी गर्दैछन् र यस अद्भुत अनुभव सँगै साझा गर्न!। त्यसो भए, बोस्कोइन वेबसाइटमा हेर्नुहोस् र तिनीहरूबाट रोजगार प्रस्ताव प्राप्त गर्नुहोस्।
यहाँ लागू: https://www.huobigroup.com/en-us/jobs/
हूबी समूहले धेरै व्यक्तिलाई काममा लगाएको छ। कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय कामदारहरूलाई सिंगापुर वा लन्डनमा लैजान सक्छ। त्यसोभए पक्कै पनि यो कम्पनीले क्रिप्टोकरन्सी क्यारियरको लागि जान योग्यको छ। हुओबीमा सम्मिलित हुनुहोस् संसारको कुनै पनि ठाउँबाट। ग्लोबल बजारको शोषण गर्नुहोस् र विश्वलाई मूल्य दिनुहोस्। यो फर्मले निश्चित रूपमा रोजगारी लिन खोजिरहेका प्रवासीहरूका सबै आवश्यकताहरूको जवाफ दिन्छ।
यहाँ लागू: https://www.atomintl.com/careers
ह Hongक Kongमा एक नयाँ कम्पनी। तर धेरै राम्रो इन्टरनेट मा विस्तारित। यस कम्पनीले पहिले नै प्रवासी श्रमशक्तिमा सम्भाव्यताको पहिचान गर्यो। एटम समूहलाई थाहा छ कि प्रवासीहरूको लागि बृहत प्रतिभा पोखरीले उनीहरूलाई लक्ष्यमा छिटो पुग्न मद्दत गर्दछ। र एक धनी एशियाबाट सांस्कृतिक मिश्रण र युरोपले कम्पनीलाई बढि विस्तार र भविष्यको नवीनता दिन अनुमति दिनेछ। एटम समूहको साथ क्यारियर एशियाई क्रिप्टोकरन्सी रोजगारहरू र व्यक्तिगत उच्च उपलब्धिमा राम्रो सुरुवात हुनेछ।
यहाँ लागू: https://www.okex.com/pages/company/recruit.html
यस कम्पनीले यस समयमा प्राविधिक सम्बन्धित व्यक्तिहरू र अपरेशन व्यवस्थापनको लागि खोजीरहेको छ। तर त्यहाँ काम गर्न अझ राम्रो कम्पनी छ। एक राम्रो भुक्तान कार्यहरू वरिष्ठ सी ++ विकास ईन्जिनियर साथै वरिष्ठ उत्पाद प्रबन्धक हो। एक क्लिक सीभी पठाउँदै छ त्यसैले यो हुनु पर्छ नयाँ काम खोज्नेहरूको लागि धेरै छिटो र राम्रो विकल्प.
यहाँ लागू: https://makerdao.com/careers/
निर्माता कम्पनीले कसरी ब्लकचेन बजारको सम्भावनालाई बुझ्न जान्दछ। यो संस्थाको निर्देशक बोर्डले ग्रहमा लगभग कुनै पनि ठाउँमा कुशल र अनुभवी व्यक्ति खोजिरहेको छ। चीन, डेनमार्क र अमेरिकाका मानिसहरू सँगै काम गरिरहेका छन्।
तपाईंले सामेल हुन प्रयास गर्नुपर्छ निर्माता टीम किनभने उनीहरूको टोलीले तपाईंलाई अचम्मको क्यारियर प्रगतिको निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ। आफ्नो CV अपलोड गर्नुहोस् र सबूत र उनीहरूको असाधारण कम्पनी खोज्न सुरु गर्नुहोस्। त्यहाँ पुग्ने उत्तम तरीका एक सफा रेकर्ड र उपलब्धिहरु लाई प्रगति गर्नु पर्दछ।
यहाँ लागू: https://www.globalcap.com/jobs/
विश्वव्यापी शिविरले विश्वको पहिलो टोकनगरिएको इक्विटीलाई पूर्ण नियामक पर्यवेक्षणको क्रममा मुद्दा पुर्याएको छ। यो कम्पनी लन्डनको शहरमा आधारित छ र निश्चित रूपमा विश्वमा रूचाइएको पैसा निवेश कम्पनी मध्ये एक हो।
ग्लोबल क्याप टीम र उनीहरूका लगानीकर्ताहरू र निश्चित रूपमा उनीहरूका सबै समर्थकहरूको लागि धन्यवाद। ग्लोबल क्याप युरोपमा एक राम्रो र लोकप्रिय कम्पनी बन्छ। यस कम्पनीको व्यवस्थापकहरू व्यवस्थापन गर्छन् एक स्मारक माइलस्टोन प्राप्त गर्न वित्तीय बजार को विकास मा। त्यसो भए, तिनीहरूसँग, तपाईं कसरी विश्वव्यापी पैसा लगानी गर्ने सिक्ने प्रबन्धित गर्नुहुनेछ।
यहाँ लागू: https://appliedblockchain.com/join
लन्डनमा लागू गरिएको ब्लकचेन व्यवसायमा सामेल हुनुहोस्। यो संगठन लन्डनको सिटी र पोर्टोमा धेरै सयौं व्यक्ति भर्ती गर्दैछ। निश्चित रूपमा, तिनीहरू साक्षात्कार प्राप्त गर्न लायक अर्को कम्पनी हुन्।
त्यसैले, यदि तपाईं राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार खोज्दै हुनुहुन्छ ब्लकचेन कम्पनीमा तपाईंले उनीहरूलाई CV पठाउनु पर्छ विशेष गरी यदि तपाईं राम्रोसँग कोडिंग र Js क्वेरीमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भने। तिनीहरू लगातार राम्रो आईटी स्किलको साथ अत्यधिक प्रेरित व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेका छन्। यसबाहेक, लन्डन आधारित महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरू जो अभिनव ब्लकचेन टेक्नोलोजी व्यवसाय पुर्‍याउने बारेमा जोशिला छन्।
बहादुर वेब ब्राउजर
यहाँ लागू: https://brave.com/jobs/
बहादुर यो एक इन्टरनेट ब्राउजर कम्पनी हो जुन तपाईको डाटा बचत नगर्ने हो र यो केवल कुनै अन्य ब्राउजर भन्दा बढी छिटो छ। तिनीहरू कुनै आईओसी वा क्रिप्टक्रोसीसी सम्बन्धी व्यवसाय छैन। तर तिनीहरू लोग्नेहरूलाई क्रिप्टट्रोरेन्सी व्यवसायको धेरै अनुभवको साथ काम गर्दै छन्। बहादुर ब्राउजरले इन्टर्नशिपहरू जस्ता पीडीएडलाई पनि मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यसोभए, तिनीहरूको कम्पनीको जानकारीमा एक नजर राख्नुहोस् र तिनीहरूसँग राम्रो स्थितिको लागि आवेदन दिन प्रयास गर्नुहोस्। बहादुर सामान्यतया टेक-उन्मुख व्यक्तिहरूको खोजीमा बोल्छन् किनकि उनीहरू इन्टरनेट व्यवसायमा काम गरिरहेका छन्।
यहाँ लागू: www.solve.care.com
व्यापार को एक उच्च गुणवत्ता संग एस्टोनियाई कम्पनी। उनीहरूसँग धेरै रोजगारीका अवसरहरू छन्उदाहरण को लागी, संरक्षक UI / UX र वेबसाइट डिजाइनर। उनीहरू यस समयमा युरोपमा खातामा छन् तर तिनीहरूको वेबसाइटबाट रोजगार अवसर धेरै राम्रो देखिन्छ।
सामान्यतया, सीईओ र एसआर.development प्रबन्धक वा ईन्जिनियरिङ्का कार्यकारी सहायक क्रिप्ट व्यवसायको भित्र एक स्मार्ट चक्रको जस्तो देखिन्छ। ठीक छ, यो नियोक्ता संग आफ्नो भाग्य को कोशिश, आफ्नो अद्यतन पाठ्यक्रम भिता पठाउन को लागि धेरै आसान तरीका।
यहाँ लागू: https://www.huobi.com/careers/
सान फ्रान्सिस्कोको अर्को कम्पनी, यूएस हुओबी पनि माथि छ धेरै आश्चर्यजनक रोजगार अवसरहरू। कम्पनीले आफूलाई HBUS होल्डको इंक भनेर चिनिन्छ। र दुबै ब्लकचेन र क्रिप्टोकरन्सी टेक्नोलोजी स्टार्ट-अप सम्बन्धित व्यवसाय हो। यो संगठन प्रविधि र वित्त कार्यकारी बजारहरू बीच पूर्णरूपमा परिचालित छ। तिनीहरू आफ्नो ग्राहकहरु लाई उत्पादन र सेवाहरु को लागी तयार छन् विश्व भर बाट धेरै प्रवासीहरु भाँडामा तयार छ.
अमेरिकामा आधारको रूपमा, तिनीहरू पूर्ण रूपमा विनियमित वित्तीय संस्थान हुन्। कम्पनीले सिलिकन घाटीको सबैभन्दा राम्रो क्षेत्रमा गर्व सम्बन्ध राखेको छ। यसबाहेक, क्रिप्टो व्यवसायमा रचनात्मक दिमागहरू लिइरहेका छन्, सामान्यतया बोल्दै, निरन्तर नवाचार र अनौपचारिक सोचले यो कम्पनीलाई अमेरिकामा उच्च स्थितिमा बनाउँछ।
अन्य Cryptocurrency वेबसाइटहरू जुन तपाईंसँग उनीहरूको बिचको भाग्य प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ
यहाँ लागू: https://zilliqa.com/careers.html
यो क्रिप्टसुरक्षा कम्पनी जिलिक्मा मा काम गर्दै ब्लकचेन व्यवसायमा यो ठूलो लाभ हुनेछ। तपाईंले तिनीहरूलाई विश्वभरिका Zilinqa ब्रान्ड बनाउन तिनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
यस कम्पनीको साथ, तपाईं अर्को जेनरेशन blockchain व्यवसाय निर्माण हुनेछ। र विश्वभरि blockchain प्लेटफर्म भित्र उच्च-थ्रुपुट। त्यसो भए, यो कम्पनी नयाँ क्यारियर अवसरको शक्ति गर्न लायक छ विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरू र क्रिप्टोकुरेन्सी प्रकारका परियोजनाहरू भित्र।
यो cryptocurrency Bitcoin कम्पनीको हो, तथापि, तिनीहरू छुट्टै छुट्टिदैछन् वेबसाइट जहाँ तपाइँ अलि अलि सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईंले वास्तवमै क्रिप्टोकुरेन्सी कामहरूको लागि आवेदन गर्नु अघि। Bitcoin नगद एक राम्रो मूल्य भर मा सिक्का बजार टोपी र धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू त्यहाँबाट जानकारीका टुक्राहरू पाइरहेका छन्।
यहाँ लागू: https://www.stellar.org/
यो क्रिप्टो-विकास प्रणालीले मानिसहरूलाई आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू हेरिरहेका छन् तिनीहरूको बढ्दो टीममा सामेल हुनको लागि प्रेरितहरू। त्यसोभए, तिनीहरूको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् र भुक्तानीको संसार परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नुहोस्!
यहाँ लागू: https://eos.io/
EOS क्रिप्टोकरन्सी यो उनीहरूको असाधारण प्रतिभा को गर्व छ। यस संस्थामा धेरै कामहरू लिन सकिन्छ। रोजगार खोज्नेहरूले कोडर रिक्त पदहरू, डिजाइनरहरू, एसईओ प्रबन्धकहरू, वेब विकासकर्ताहरूलाई सहयोग गर्नका लागि स्टाफ, र जेष्ठ विकासकर्ताहरू छनौट गर्न सक्दछन्। किनभने तिनीहरूको सबै टीमहरू प्रत्येक क्षेत्रमा एक्सेल.
EOS भर्ती अन्तर्राष्ट्रिय एक्सटेट्स।
यस कम्पनीका टीमहरू विश्वका विभिन्न स्थानहरूमा आधारित छन्, उदाहरणका लागि भारत, पाकिस्तान, अमेरिका र क्यानडा। मानिस वास्तव मा कुनै पनि देशबाट आउन सक्छ blockchain व्यवसाय संग पनि सम्बन्धित छैन। त्यसोभए, उनीहरूको कम्पनीलाई प्रतिबिम्बित गर्दै उनीहरूसँग काम खोज्दै वास्तवमा एक वैश्विक संगठन को रूप मा.
यहाँ लागू: https://www.iota.org
Iota अर्को क्रिप्टोकरन्सी हो जुन व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ट्रेड गरिरहेका छन्। सुपरमा लोकप्रिय छैन र नाममा आधारित छैन तर सिक्का बजारमा राम्रोसँग स्थित छ। अहिले तिनीहरू भाडामा छैनन्। तर यो रोजगार पाउनको लागि राम्रो कम्पनी हो। गहिरो दृश्य पाउन लायक छन् किनकि यो फर्म क्रिप्टो बजारमा विस्तारै बढ्दैछ।
IOTA रुचि फर्म छ त्यसोभए तिनीहरूले 14th स्थितिमा सिक्का बजार टोपीमा छन्। IOTA कम्पनीले स्मार्ट अनुबंध प्रयोग गरेर व्यवस्थापन प्रणाली र डिजिटल सम्पत्तिहरू स्वचालित बनाउँछ। तिनीहरू वितरित सञ्जाल प्रयोग गर्दैछन्, यसले "स्मार्ट ब्लकचाई अर्थव्यवस्था" सिर्जना गर्ने उद्देश्य राख्दछ।
यहाँ लागू: https://www.circle.com/en/usdc
अमेरिकी डलर सिक्का यो डिजिटल सिक्काको साथ अर्को सिक्का कम्पनी हो। अमेरिकी डलर सिक्का एक अमेरिकी डलर ब्याक स्थिर सिक्का हो। राम्रो cryptocurrency परियोजना एक नौकरी प्राप्त गर्न। अहिले उनीहरूले मानिसहरूलाई काममा लिइरहेका छैनन्। तर उनीहरूसँग छोटो कुराकानी गर्न लायक छ। अमेरिकी डलर सिक्का एक क्रिप्टो-मात्र एक्सचेन्ज प्लेटफर्म हो। युएसडीसी डलर र ट्रेडिंग बीचको पुल हो। र निश्चित रूपमा क्रिप्टोकरन्सी र ब्लकचेन टेक्नोलोजीको सन्दर्भमा धेरै राम्रो काम गर्दैछ।
र ती मानिसहरूका लागि कम्पनी र स्थानीय हामीलाई आधारित टेक्नोलजीहरू निर्यात गर्नका लागि पहिले नै फिएट स्वीकार गर्छन्, उनी क्रिप्टो व्यवसायमा काम गर्न मद्दत गर्छन्।
यहाँ लागू: https://z.cash
Z कैश ​​एक अन्य राम्रो कम्पनी हो कि एक नजर र बढ्दो ब्लकचेन टेक्नोलोजी संगठनको लायक छ। प्रभावकारी बनाउन व्यापार र राम्रो फर्ममा पूर्ण गोपनीय कम्पनी। तपाईले निश्चित रुपमा यो कम्पनीसँग सम्पर्क व्यवस्थापन गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
Zcash थियो विकसित र 2016 मा शीर्ष क्रिप्टोग्राफरहरू द्वारा सुरू गरिएको। त्यसोभए, यस प्रकारको व्यवसायमा निस्सन्देह यसको लायक निश्चित नै छ।
संस्था अन्तर्निहित प्रोटोकल जुन एमआईटी, टेक्शियनबाट वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानमा आधारित छ। साथ साथै जोन्स हप्किन्स, तेल अवीव विश्वविद्यालय र यूसी बर्कले। त्यो हो मानिसहरूलाई काम गर्न निश्चित दृष्टिकोण प्रदान गर्दै.
यहाँ लागू: https://www.dash.org
ड्यास कम्पनी अर्को डिजिटल क्रिप्टोकरन्सी हो। निश्चित रूपमा, तपाईं यी क्राइप्टो सिक्का प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ निजी भुक्तानी अनलाइन गर्न। ड्यास कम्पनी क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेन्ज प्लेटफार्महरूमा जान्छ। कम्पनी रोजगार पाउन लायक छ र निश्चित रूपमा तिनीहरू राम्रो र एक हो सकारात्मक बढ्न over cryptocurrency बजारमा। कम्पनी P2P पछिल्लो जेनेरेसनमा धेरै राम्रो हुँदै गइरहेको छ।
यहाँ लागू: https://neo.org
नियो स्मार्ट क्रिप्टोकरन्सी यो अर्को राम्रो कम्पनी हो। निओले क्रिप्टो र डिजिटल सिक्काको लागि धेरै राम्रो वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। हाम्रो कम्पनीले तपाईंलाई यस कम्पनीमा पुग्न मद्दत गरिरहेको छ। तिनीहरू आश्चर्यजनक लोगोको साथ एक राम्रो कम्पनी हो जसले स्मार्ट अर्थव्यवस्था निर्माण गर्दैछ। एनईओ कम्पनी एक नाफा नकमाउने समुदाय-द्वारा संचालित ब्लकचेन परियोजना हो। तिनीहरूसँग एक कुरा यो हो कि उनीहरू उपयोग गरीन्छ blockchain टेक्नोलोजी र डिजिटल पहिचान क्रिप्टोकरन्सी बजारमा सम्पत्तिहरू डिजिटलाइज गर्न।
यहाँ लागू: https://tezos.com/
स्मार्ट सम्झौता र विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरूको लागि ब्लकचेन व्यवसायमा टेजोस एक नयाँ प्लेटफर्म हो। राम्रो प्लेटफर्म निकट भविष्यमा रोजगार खोज्नको लागि। अहिलेको कम्पनीले प्रारम्भिक विकास प्रक्रियाको कारण भाँडामा पाइरहेको छैन। तर पक्कै पनि, टेजोस एक ब्लकचेन हो जुन आफै अपग्रेड गरेर विकसित हुन सक्छ।
शेयरधारकहरू र व्यवसाय मालिकहरू र निश्चित रूपमा लगानीकर्ताहरूले संशोधनमा भोट दिन सफल भएका छन् यो आश्चर्यजनक विचार। स्मार्ट टेक्नोलोजी र डिजिटल अनुभवको साथ एक राम्रो कम्पनी।
यहाँ लागू: https://dogecoin.com/
डोगेकोइन एक किंवदन्ती विकेन्द्रीकृत, पियर-टु-पियर डिजिटल मुद्रा हो। सामान्यतया भन्ने हो भने, यो मुद्रा इन्टरनेटमा एक ठट्टाको रूपमा शुरू हुन्छ। तर मालिकहरूले तुरुन्तै पत्ता लगाउँछन् यो सुरु गर्न को लागी एक राम्रो विचार हुन सक्छ.
डोजेकोइन एक राम्रो वेबसाइट हो र सिक्का मार्केट क्यापमा बलियो स्थिति राख्दछ। यो कम्पनी सेवाले तपाईंलाई सजिलैसँग अनलाइन पैसा पठाउन सक्षम गर्दछ। यसलाई "इन्टरनेट मुद्रा" को रूपमा सोच्नुहोस् तपाइँले जानकारीको एक राम्रो मूल्यवान स्रोत फेला पार्नुहुनेछ यो ब्लक चेन व्यवसाय को बारे मा।
यहाँ लागू: https://wavesplatform.com/
तरङ्गहरू सिक्का र प्लेटफार्म हुन् जुन क्रिप्टकोरोसीको सन्दर्भमा एकदम राम्रो मूल्य प्रबन्ध गर्दै छन्। र यो कम्पनी निश्चित पक्का परिणाम नखोजी छ। तरकारी सिक्का नयाँ डिजिटल मुद्रा बजारको लागि जाँदैछ।
तरंगहरू सिक्का सब भन्दा द्रुत बृद्धि गर्ने क्रिप्टो संसारको प्लेटफार्मको अंश बन्छन्। यस कम्पनीले केवल सिक्का मात्र सिर्जना गर्दैन सिर्जना गर्न धेरै राम्रो प्रबन्धन म्युचुअल मुद्रा वालेटहरू उनीहरूको ग्राहकहरूको लागि।
यहाँ लागू: https://www.trusttoken.com/careers.html
ट्रस्ट टोकन वास्तवमा राम्रो दृष्टिकोणको कम्पनी हो। र तिनीहरूसँग एक क्यारियर वेबसाइट छ। उनीहरूसँग ब्लकचेन विश्वमा वित्तीय अवसरहरू प्रजातान्त्रिक गर्न को लागी सेवा छ विश्वस्त व्यापार द्वारा पूँजी अनलक गरेर सम्पत्ति विश्वव्यापी। ट्रस्ट टोकनले हाइप्याट्स एक्स्पिट्सको प्रतिक्षामा रहेको कम्पनीका कार्यकारीहरूलाई नयाँ स्तरको पुँजी, लगानी, र वित्तीय अवसरहरूको पहुँच प्रदान गर्दछ।
यहाँ लागू गर्नुहोस्: https://qtum.org/en/about/recruitment
कटिमले धेरै स्थानहरुमा भर्ती गर्दैछ: बीजिंग, शंघाई, सिलिकन घाटी। यदि तपाईं मोबाइल एप्समा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो कम्पनी निश्चित रूपमा तपाईंको लागि राम्रो स्थान हो। Qtum सँग आर एन्ड डी ब्लकचेन प्रविधिको विकास दिशा यो एक स्मार्ट चाल हुनेछ।
सिक्का मार्केट क्यापमा क्युटम फर्मको राम्रो स्थान छ। Qtum बाट प्रस्ताव क्राइप्टोकुरोन्सीले तपाईंको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। र निश्चित रूपमा, तिनीहरूको वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् किनभने तिनीहरू हुन् बढ्दो र अन्तर्राष्ट्रिय भर्ती.
यहाँ लागू: https://litecoin.org/
ब्लकचेन टेक्नोलोजीको आधारमा अर्को राम्रो क्रिप्टक्रोसीसी। यो कम्पनीले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई विन्डोजमा सबै चीज डाउनलोड गरेर धेरै सजिलो बनाउँछ। दुर्भाग्यवश, तिनीहरू क्यारियर सेक्शन एन वेबसाइटमा छैनन्। तर तपाईं सक्नुहुन्छ Linkedin मा एक कम्पनी नौकरी पोस्ट खोज्नुहोस। हामी दृढतापूर्वक विश्वास गर्छौं कि यो कम्पनीले अर्को 10-15 वर्षमा धेरै व्यक्तिहरू भाडा लिनेछ।
यहाँ लागू: https://www.cardano.ogr/
कार्डानो क्रिप्टो मुद्रा केवल एक कम्पनी मात्र होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने, तिनीहरूसँग3संगठनहरू छन्। ती सबै उही लक्ष्यमा काम गर्दै, कार्डानो नामको ब्लकचेन टेक्नोलोजीको विकासमा योगदान दिँदै।
यहाँ लागू: https://ww.getmonero.org/
मोनिरो क्रिप्टोकरन्सी अर्को वेबसाइट हो जहाँ तपाईं हेर्नु पर्छ। अहिले उनीहरूसँग पनि छैन रोजगार वा क्यारियर सेक्सन। तर यो कम्पनी बढ्दै छ र निकट भविष्यमा निश्चित रूपमा केहि खाली स्थानहरू छन्।
यहाँ लागू: https://holochain.org/team.html
होलो चेन कम्पनीको अनुभवी कोडेक / आईटी प्रबन्धकहरू र क्रिप्टो व्यवसाय इन्टरनेट टेक्नोलोजी विशेषज्ञहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुन्। यदि तपाईं भित्र पट्टि र कम्प्यूटर विज्ञान वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने। HoloChain कम्पनी खोज्दै छ: जानु, जंग, जावास्क्रिप्ट, डीभीटी संचार मोबाइल अनुप्रयोग विकासकर्ता र जाभास्क्रिप्ट, डीपीकेआई।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईंसँग फ्रन्ट-एन्ड सीएसएस सीपहरू छन्। र HTML राम्रो विकास अनुभव। तिमी सक्छौ उनीहरूबाट राम्रो रोजगार प्रस्तावहरू छन्। साथै पृष्ठ लेआउट, एकल-पृष्ठ अनुप्रयोगहरू, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया-मूल यो सबै प्रकारको काम र अनुभव तपाईं यस कम्पनीमा ल्याउन सक्नुहुन्छ।
यहाँ लागू: https://ont.io/
ओन्टोलोजी कम्पनी, चीन मा ब्लकचेन कम्पनी। यस फर्मका प्रबन्धकहरूले पहिलो ब्लकचाहिँ चीनी ब्लकचेस्टर विशेषज्ञहरू बनिन्। उनीहरूका मुख्य परियोजनाहरू चीनबाट डेन्टेन्ट्रेटेड पहिचान फाउण्डेशनमा सामेल हुन आउँछन्। यो राम्रो छ र सिक्का टो बजारमा राम्रो स्थिर स्थिति रहेको छ।
यस फर्मका प्रबन्धकहरूले अनलाइन पहिचानका लागि मानक विकेन्द्रीकृत ईकोसिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। धेरै कर्मचार व्यवसायहरूसँग राम्रोसँग व्यवस्थित गरियो यो सधैं हुन्छ राम्रो क्यारियर अवसरहरूमा पुरस्कृत। त्यसो भए, एक blockchain खुला स्रोतको लागि यो फर्म प्रयास गर्नुहोस् परियोजना रोजगार प्रस्ताव.
यहाँ लागू: https://www.vechain.org/
VeChain कम्पनी बिना सीमाको फर्म गर्न राम्रो छ। VeChain एक प्रमुख वैश्विक उद्यम स्तर सार्वजनिक अवरोध प्लेटफार्म हो। तिनीहरू सिंगापुरमा आधारित छन् र तिनीहरूको व्यवस्थापन त्यहाँ देखिन्छन्। निश्चित रूपमा, तपाईं तिनीहरूको पृष्ठमा जान सक्नुहुन्छ र पृष्ठको तल्लोमा भर्खरको भर्खरको इमेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
VeChain ले blockchain टेक्नोलोजी लाई जडान गर्नु हो एक व्यापक शासन संरचना प्रदान गरेर वास्तविक विश्व, एक मजबूत आर्थिक मोडेल साथ साथै उन्नत IoT एकीकरण, र वास्तविक-विश्व अनुप्रयोगहरूमा अग्रगामीहरू।
यहाँ लागू: https://renproject.io/
रेन कम्पनी क्रिप्टो व्यवसायको लागि हो र डार्क नोडहरूको विकेन्द्रीकृत नेटवर्क द्वारा संचालित हो। र सामान्यतया बोल्दै, यो कम्पनीले गोपनीयता-संरक्षित अनुप्रयोगहरू चलाउन सुरक्षित बहुदलीय गणना प्रयोग गर्दछ। त्यसोभए, यदि तपाईंसँग राम्रो प्रोग्रामर सीप छ तपाईंले आफ्नो CV पठाउनु पर्छ र पोर्टफोलियो। रेन, यसको बारेमा पढ्नको लागि यो चासोको विषय हो किनभने तिनीहरू आफैंलाई ठूलो कम्पनी बन्न दबाब दिन सक्षम छन्।
यहाँ लागू: https://ddex.io/
DDEX प्लेटफर्म पहिलो विकेन्द्रीकृत विनिमय हाइड्रो प्रोटोकलमा निर्मित हो। कम्पनी त्यो कि सबै विश्व मा ज्ञात छैन। तर सामान्यतया बोल्दै, टेक्नोलोजी बढाउँदै, तत्काल, वास्तविक-समय अर्डर सुरक्षित अन-चेन सेटलमेन्टको साथ कुरा मेल खान्छ। यो तिनीहरूको वेबसाइट मा एक नजर लायक लायक छ। कम्पनी बढ्दै छ उनीहरूको वेबसाइटमा केहि चाखलाग्दो काम हुन सक्छ.
यहाँ लागू: https://www.bitinka.com/uk/bitinka/home
BItinka अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरु को लागी एक क्रिप्टोकरन्सी ब्रोकर र प्लेटफर्म हो। हालसालै तिनीहरूसँग क्यारियर लि having्क छैन। तर यो कम्पनी एक हो बढ्दो संगठन। त्यसोभए, निश्चित रूपमा तिनीहरूको वेबसाइटमा हेराई गर्न लायक हुनेछ।
यहाँ लागू: https://www.decred.org/
अस्वीकार एक स्वायत्त डिजिटल मुद्रा हो। सिक्का 2016 मा आफ्नै अपरेसन सुरु हुन्छ। डिकोड सिक्का उद्देश्य ब्लकचिन्ह प्रशासन समाधान गर्न व्यवस्थित छ।
यो कम्पनी अभिनव भन्दा बढी छ। डेन्टेन्ट्रलकृत निर्णय र आत्म-वित्तपोषणले हामीलाई बलियो, विकसित डिजिटल मुद्रा निर्माण गर्न सक्षम बनाएको छ, तेस्रो-पक्षको प्रभावबाट मुक्त।
यहाँ लागू: https://www.augur.net/
Augur कम्पनी ब्लकचेन को आधार मा भविष्यवाणी प्रविधी फर्म जस्तै अधिक छ। बेशक उनि आफ्नो क्रिप्टप्टोरेसी र ब्लककेन सिक्का को प्रबंधन गर्दै छन्। ग्राहकहरूले तिनीहरूलाई अनुप्रयोगमा प्रयोग गर्न सक्छन् वा तिनीहरूको प्रणाली ल्यापटपमा डाउनलोड गर्न सक्छन्।
एक रोचक प्वाइन्ट कि यस ब्लकचिन टेक्नोलोजीको साथ तपाईं आपदाहरू वा कम्पनी वित्तीय असफलहरू भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाई थाहा पाउनुहुन्छ कि उनीहरूलाई कसरी उचित तरिकामा प्रयोग गर्ने।
यहाँ लागू: https://changelly.com/
यो छिटो विनिमय कारोबारमा दर्ता गर्ने कम्पनी हो। Changelly क्रिस्टोक्रेंसीमा मानक मुद्रा आदान प्रदान गर्न आदानप्रदान प्रक्रिया को लागी एक फरक दृष्टिकोण लिन्छ।
परिवर्तनीय तिनीहरूको ग्राहकहरूको क्रिप्टो एक्सचेन्ज प्लेटफर्ममा उनीहरूको क्रिप्टो कर्न्सी भण्डारणको सट्टा, उनीहरूले रूपान्तरण लेनदेन सेट अप गरे। त्यो निश्चित रूपमा ट्रेड क्रिप्टो रकम बचत गर्न धेरै अधिक तरिकाहरू दिँदै। दुबई सिटी कम्पनीले तिनीहरू क्यारियर वेबसाइट जेट छैन भनेर पुष्टि गर्न व्यवस्थित छन्। तर पप-इन गर्नका लागि अझै हेर्नुहोस्।
निष्कर्ष: जॉब्स र केयररमा क्रिप्टोक्रुरिटी
आफ्नो समय बर्बाद मत करो र दुबईमा बिटकोइन कार्यका लागि आवेदन गर्नुहोस्। किनकी क्रिप्टक्रोरेन्सी सबै भन्दा छिटो छ बढ्दो बजार। दुबई सिटी कम्पनी नौकरी चाहनेहरुलाई एक नौकरी प्राप्त गर्न मा मदद गर्दछ। विशेष गरी उच्च टेक्नोलोजी बजारको साथ। हाम्रो कम्पनी तपाईंको अद्यावधिक पुनः सुरुवातको लागि पर्खिरहेको छ। चाहे तपाईं कहाँ हो? हामी लिदैछौँ भारतबाट काम गर्ने चाहनाहरू र दुबईमा राख्नु। Cryptocurrency Jobs हो नयाँ विदेशियहरुको लागि खुला सारा संसारबाट।
यस प्रकारको रोजगार पाउन अर्को तरिका पनि छ। उदाहरणका लागि, तपाईं सक्नुहुन्छ आफ्नो सीवी नौकरिहरु को बोर्ड मा पोस्ट गर्नुहोस वा आफ्नो विवरणहरू दर्ता गर्नुहोस् श्रमिकहरुको लागि स्थानीय मध्य पूर्व पोर्टल। कुनै पनि कुरा तपाईं जान्नुहुनेछ। जब सम्म व्यापारिक उद्योग बाट नौकरी प्रस्ताव आयो। तपाईं नौकरी खोजी खेलको विजेता हुनुहुन्छ।